विदेशबाट फर्किंदै हुनुहुन्छ ? सरकारले तोक्यो ७८ क्वारेन्टिन होटल, कति लाग्छ शुल्क ?
काठमाडौं : सरकारले विदेशबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरु बस्नका लागि ५ वटा पाँचतारेसहित ७८ वटा होटललाई क्वारे’न्टिन होटलका रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।
बुधबार पर्यटन विभागले होटलको सूची सार्वजनिक गर्दै न्यूनतम मापद’ण्ड तोकेको हो ।सरकारले खाडीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्कनेलाई ५ दिन र अन्य अवस्थामा फर्कने नेपाली र विदेशी नागरिकलाई १० दिन होटल बुकिङको प्रमाण
देखाएपछि मात्र नेपाल आउन अनुमति दिने नियम बनाएको छ । सोहि नियम अनुसार नेपाल आउनेहरुलाई बस्नका लागि क्वारेन्टिन होटल तोकिएको विभागले जनाएको छ ।विभागले सार्वजनिक गरेको सूचीमा रहेका होटललाई यात्रुले क्वारेन्टिनका लागि बुक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल नेपालले पहिलो चरणमा टर्की, कतार, चीन र भारतमा नियमित हवाई उडान खुला गरिएको छ । काठमाडौंका सांग्रिला, होटल र्‍या’डिसन, होटल याक एण्ड यती, हायात -, सोल्टी, अलफ्ट होटल र एभरेष्ट होटल गरी ७ वटा पाँचतारे होटललाई विभागले क्वारे’न्टिन तोकेको छ ।
यी होटल सञ्चालकले २५ भन्दा बढी कोठा क्वारेन्टिन बनाउन सहमत भएका छन् । चारतारे स्तरका होटल शंकर र होटल हिमालयसमेत क्वारे’न्टिन होटलमा सूचीकृत भएका छन् । तीनतारे स्तरका समिट होटल, अमादब्लम होटल, साम्बाला होटल, ले हिमालय, होटल प्लाटिनम, होटल ट्रेडिसनल कम्फर्ट र होटल ल्याण्डमार्कमा समेत यात्रुले क्वारे’न्टिन बस्न सक्ने छन् ।
यसबाहेक पर्यटनस्तरका ५१ होटल र दुई रिसोर्ट पनि क्वारे’न्टिन सूचीमा समावेश छन् । रिसोर्टमा बुढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज र गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट समावेश छ । पर्यटकस्तरीय होटेलमा धुलिखेल लज रिसोर्टलाई यो सूचिमा राखिएको छ ।
सरकारले तारे होटलले क्वारेन्टिन बसेवापत लिने शुल्क तोकेको छैन । ती होटल स्वयंले मूल्य तोक्न सक्ने जनाएको छ । तर पर्यटनस्तरका होटलको दैनिक शुल्क भने ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसभित्र बिहानको खाजा, खाना, दिउँसोको खाजा र साँझको खानासमेत पर्छ ।
क्वारेन्टिन तोकिएको होटलमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, होटल परिसरभित्र छुट्टै गेट वा कम्पाउण्ड भएको र सकेसम्म घुमफिर गर्न सक्ने खुला स्थान र बगैंचा हुनुपर्छ । होटल क्वारे’न्टिनमा रहेका हवाई यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न र स्वा’ब परीक्ष’णको नमुना संकलनका लागि समेत प¥र्याप्त स्थान भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
होटलको कोठामा टिभी, वाईफाईको सुविधा अनिवार्य गरिएको छ । अट्याच ट्वा’इलेट र नुहाउन तथा पिउने तातोपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होटलले खाना र अन्य सेवा कोठामा वा प्यासेजमा मात्र प्रदान गर्नुपर्छ ।
होटलले सामूहिक रुपमा खाना खाने स्थान, बुफे, जिम, साउना, इण्डोर तथा आउटडोर गेम भने पूर्ण रुपमा बन्द गरेको हुनुपर्छ । नेपाली तथा विदेशी नागरिक विदेशबाट आउँदा पालना गर्नुपर्ने आदेश २०७८ को भने पूर्ण पालना गर्नुपर्ने गरी नियम बनाइएको छ ।-साझा सबाल
२०७८ जेष्ठ २०, बिहीबार १९:५५ गते 1 Minute 845 Views